Dr. Nagarii Leencoo:Yunivarsitiin Jigjigaa Kan Bulchiinsa Naannoo Somaalee Miti.Kanaaf Barsisoonnis Ta’e Barattonni Sodaachuu Hin Qaban
Onkoloolessa 10, 2017
Barattoonni Oromoo, kanneen Yuniversitii Jigjigaatti barataa turanii fi barsiisonni isaanii haala nageenyaa amma yaaddesaa ta’e keessatti gara sanatti deebi’uun lubbuu keenyaaf sodaachisaa dha jechuun iyyataa jiran. Mootummaan Itiyoophiyaa garuu rakkoo nageenyaa uumame furuuf waan carraaqqiin jabaan godhamaa jiruuf deemuun isaanii miidhaa hordofsiisu hin qabu jedha.
Bulchiinsa naannoo Somaalee keessaatti badii adda addaa dhaqqabsisaa kan turan hidhattoota adda bilisummaa uummata Ogaadeen waraanuuf kan leenjifamee Liyyuu Poliis badii akkanaa dhaqqabsisuun kaayyoo hundeeffameef miti jedhu Itti-gaafatamaa Biiroo Dhimmotoa Koomunikeeshinii Mootummaa Federaalaa Itiyoophiyaa Dr. Nagaii Leencoo.
Uummattonni gosa adda addaa bulchiinsa naannoo Somaalee keessa waan jiraataniif jecha itti gaafatamnii Liyyu Pooliis addatti ba’e kan Somaalee qofa ta’u hin qabu jedhan.Kana malees Yunivarsitiin Jigjigaa Kan Bulchiinsa Naannoo Somaalee Miti.Kanaaf Barsisoonnis Ta’e Barattonni Sodaachuu Hin Qaban jedhan.
Koreen addaa qaamoota adda addaa of-keessaa qabu hundeeffamee jabinaan irratti hojjataa kan jiru ta’uus ibsanii jiru.
Abbaa Duulaa Gammadaa Aangoo Gad Dhiisuuf Gaafatan
Filannon pirezidaantummaa Keenya dhiyaachuutti jirtii hiriira mormiilleen jalaan ittuma jira
IMF Mallaqa Somaaliyaa Haraa Maxxansuu Irratti Gargaaraa Jira
Prezidaantiin Yunaayitid Isteets Walii-galtee Waa’ee Niyuukilaraa Iraan Guutummaatti Haquu Irraa Of Qusatan
Dhaabbatni Meeshaa Niyuukilaraa Addunyaarraa Dhabamsiisuuf Hojjetu (ICAN) Badhaasa Noobelii Badhaasame
Yunivarsitii Jigjigaatti Hin Deebinu,Lubbuu Keenyaaf Sodaanna: Barattootaa fi Barsiisoota